Ny kintana no nitarika ny Magy – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 janvier 11, 2013 Laisser un commentaire sur Ny kintana no nitarika ny Magy
« Dia nampaka ny Magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan’ilay kintana. Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe: Andeha, fotory tsarany amin’ilay Zazakely; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohofako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin’ny mpanjaka izy ireo dia lasa; ary, indro, ilay kintana hitany teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin’izay nitoeran’ny Zazakely. Ary nony nahita ny kintana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny ka niankohoka; ary nony efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho Azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan’Andriamanitra hevitra tamin’ny nofy izy tsy hiverina any amin’i Heroda, dia làlana hafa no nalehany ho any amin’ny fonenany. » Mat.2:7-12
Ny Filazantsara dia ny filazana ny amin’ny Famonjena nentin’i Jesosy Kristy, Ilay fanehoan’Andriamanitra ny Tenany, ILay Tenany tonga nofo, Ilay Teny tonga nofo, ary azo lazaina amin’ny teny hoe : »Epifania » manodidina ny fanambarana, fampisehoana, fanehoana…Ny fanambaran’Andriamanitra Tena amin’ny fara-tampony dia i Jesosy Kristy. Izao teksta eto izao dia dia manodidina izany fanambarana izany! Teksta milaza ny manodidina ny faha-terahan’ny Tompo Jesosy.
Ao anatin’izao teksta eto izao, dia hita ao ny tantaran’ny Magy vonona hanome voninahitry ny Tompo, ary eo koa ny mpanjaka Heroda vonona hamono ny Tompo! Ny Magy dia niomana fatratra raha vao hiainga hanatrika ny fahaterahan’Ilay Zaza, ka nanomana fitehirizan-drakitra izy ireo, ary nitondrany ny zavatra sarobidy dia volamena sy zava-manitra ary miora,; ireo zava-tsaro-bidy ireo no nataony tao anaty fitehirizan-drakiny. Nanana fikasana tsara tokoa izy ireo izany raha vao hiaiga hanatrika ny Tompo! Rehefa avy tao amin’ny mpanjaka Heroda izy ireo dia nanohy ny diany ho any amin’ny Tompony. Indro indray ilay kintana teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin’izay nitoeran’ny Zazakely . Ny fitehirizandrakitra eto dia tandindon’ny fontsika, satria hitehirizantsika ny zavatra tiantsika indrindra, fa ny an’ny Magy eto dia ny zavatra heveriny ho sarobidy indrindra no nataony tao anatin’izany fitehirizan-drakitra izany. Moa mba fanomezana mendrika ny Tompo ve no ataontsika ao antin’ny fontsika ao, moa ve ny zavatra izay sarobidy indindra amintsika no mba heverintsika ho entina ho an’ny Tompo? Mitarika ny saintsika hieritreritra ny amin’ny toe-pontsika, inona no entintsika ao anatin’ny fontsika ao rehefa handeha hihaona amin’ny Tompo isika? Rehefa ho any ampiangonana ohatra: mba tena rakitra soa ve sa eritreritra ho entin’ny fanamarinantena, na fitsarana ny hafa ihany, na fireharehana ihany? Fa ny an’ilay lehilahy iray dia raha vao niainga tany an-tranony izy handeha ho any amin’ny tempoly dia efa nohamarinina satria ny tao ampony dia ny fiaiken-keloka no nameno ny fony, ny fiankohofana teo antongotry ny Tompo, ny hifona ny amin’ny tsy mety nataony, fa tsy ny hirehareha na ny hitsara. Fa raha rakitra tsara no entintsika ao amin’ny fitehirizan-drakitsika , dia ny fontsika hanatrika ny Tompo, dia hanomana kintana hitarika antsika Izy raha vao miainga any an-trano isika.
Ny kintana dia ny Tenin’Andriamanitra nomanin’Andriamanitra hitarika ny olony. « Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny Teninao » Salamo 119:105 . Tahaka ny Isiraely nandeha tany an’efitra, dia nomanin’Andriamanitra ny andry afo hitarika azy noho ny alina ary ny andry rahona noho ny andro: rehefa maizina dia ny afo no mazava ary nataon’Andriamanitra izany hitarihina ny zank’isiraely ho fanzavana ny làlany, tahaka izany koa ny rahona amin’ny andro, ny rahona izay hita amin’ny andro no nataony hitarika. Rehefa hitan’ Andriamanitra ny zavatra soa ao anatin’ny fontsika dia ataony ho mpitarika antsika ny Teniny na amin’ ny andro sarotra na amin’ny andro hahitana ny Tompo! Nijanona teo ambonin’izay nitoeran’ny Zazakely ny kintana; nahita ny Tompo izy ireo! Ny asan’ny Tenin’Andriamanitra dia ny mitarika antsika amin’ny Tompo! Voalaza eto fa : » Ary nony nahita ny kintana izy, dia nifaly indrindra.
Manao ahoana isika rehefa mahita ny tenin’Andriamanitra? Moa ve mba faly toa ireto Magy ireto nahita ny kintana hitarika azy. Aoka mba hitondra fifalliana ho antsika ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra, ary omany ny rakitra soa ao anatin’ny fonao mba hataonao fanomezana ho an’ny Tompo!
Publié parfilazantsaramada janvier 11, 2013 Publié dansUncategorized